I-Rheumatism - Ifunyenwe.net
Oovimba abagciniweyo kudidi: I-Rheumatism
26 / 03 / 2022 /i rheumatism/av ubuhlungu
Intwasahlobo lixesha apho abaninzi bethu bayayixabisa, kodwa abo bane-rheumatism bahlala beyixabisa ngakumbi. Oku kuthetha ukuba abantu abaninzi abanokuxilongwa kwe-rheumatic basabela kwimozulu engazinzanga, utshintsho loxinzelelo lomoya kunye nokutshintsha kobushushu.
Ukuba i-rheumatologists isabela kutshintsho lwemozulu ibhalwe kakuhle kuphando (1). Uphando lubonise ukuba iintlobo ezahlukeneyo ze-rheumatism zichatshazelwa ngakumbi ziintlobo ezithile zokutshintsha kwemozulu - nangona sikwenza kucace ukuba oku kunokwahluka ngokwahlukeneyo.
-Iimeko zemozulu osabela kuzo zinokwahluka
Umzekelo, kuye kwabonwa ukuba utshintsho kuxinzelelo lomoya kunye notshintsho lobushushu luchaphazele ngakumbi abo bane-rheumatoid arthritis. Iqondo lobushushu, imvula kunye noxinzelelo lwe-barometric zadityaniswa ngakumbi nokubi ngakumbi kwabo bane-arthritis. Izigulane ezine-fibromyalgia ziphendule ngokukodwa kwinguqu ye-barometric - njengaxa imozulu isuka kuxinzelelo oluphantsi ukuya kuxinzelelo oluphezulu (okanye ngokuphambene). Ezinye izinto onokusabela kuzo kukufuma kunye nokuzinza kwemozulu ekuhambeni kwexesha.
Iingcebiso ezilungileyo nezikhawulezayo: Qala ngokuhamba okude Emazantsi enqaku, unokubukela ividiyo kunye nokuzivocavoca umzimba kwiintlungu emilenzeni. Sikwabonelela ngeengcebiso malunga nemilinganiselo yokuzenzela (enje iikawusi ucinezelo ithole og Iisokisi zokunyanzelwa kwe-fasciitis). Amakhonkco avula kwifestile entsha.
Kule nqaku Uza kufunda ngakumbi malunga:
Yintoni uvakalelo lweMozulu?
Ke ngoko, iNtwasahlobo lixesha elihle leRheumatists
Indlela ubuzaza beMozulu obunokuthi buqalise ngayo amaxesha amabi
Ukuzilinganisa kunye neengcebiso ezilungileyo ngokuchasene nokutshintsha kwemozulu
Ukuzivocavoca umzimba kunye noQeqesho ngokuchasene neLegg Cramps (kubandakanya IVIDIYO
'Kwimihla yakudala' umntu uhlala ekhumbula intetho ethi 'Ndiyiva kwigawuthi'. Kutshanje, kuye kwangqinwa ngaphandle kwamathandabuzo ukuba iimeko zemozulu zinokuchaphazela iintlungu kunye neempawu phakathi kwe-rheumatologists (2). Ezi zinto ziquka, kodwa aziphelelanga koku:
Uxinzelelo lweBarometric (uxinzelelo lomoya)
Uxinzelelo lomoya luyatshintsha
Ukutshintsha kwemozulu rhoqo
Njengoko kukhankanyiwe, abantu abanokuxilongwa kwe-rheumatic banokusabela ngendlela eyahlukileyo kwiimeko zemozulu ezahlukeneyo. Ukwahluka kwenzeka phakathi kwabo banoxilongo olufanayo. Abanye abantu banokufumana iintlungu ezikhulayo zemisipha kunye nokuqina kwamalungu xa imvula isanda kwaye ukufuma kunyuka. Abanye banokuvakalelwa ngendlela yokwanda kweziganeko zentloko kunye nezinye iimpawu ze-rheumatic.
Intwasahlobo idla ngokuba lixesha elizinzile kunokuba, umzekelo, ekwindla nasebusika. Ngale nto, sikwacinga ukuba abantu abaninzi abane-rheumatism basabela kwimozulu ebanda kakhulu kunye nokunyuka kwamanani emvula (zombini ngohlobo lwemvula nekhephu). Ke, eli lixesha lonyaka elilungele ngakumbi i-rheumatologists. Kukho izinto ezininzi ezilungileyo ezenza eli xesha lonyaka libengcono:
Ubushushu obutofotofo ngakumbi
Ukukhanya kwemini ngakumbi kunye nokukhanya kwelanga
Ukunciphisa izehlo 'zeendudumo'
Phakathi kwezinye izinto, sinokujonga idatha yemozulu ukuba umyinge wokufuma e-Oslo usuka kwi-85% kunye ne-83% ngoJanuwari noFebruwari, ngokulandelanayo - ukuya kwi-68% kunye ne-62% ngoMatshi no-Aprili (3). Iingcali ezininzi ze-rheumatologists nazo zinika ingxelo yokunyusa umgangatho wobomi kunye nokunciphisa iimpawu xa ubushushu bemozulu buzinza kumyinge ophezulu. Ukuba kuya kuqaqamba ngakumbi ngeentsuku kunye nokuba unokufikelela ngakumbi ekukhanyeni kwelanga zizinto ezimbini ezilungileyo kakhulu.
Indlela ubuzaza beMozulu obunokubangela ngayo ukuwohloka kweRheumatic
Nangona uphando lungcono kakhulu kweli candelo kunokuba belunjalo, kusekho okuninzi esingakwaziyo. Siyazi ukuba kukho izifundo ezilungileyo zophando eziye zabhala ikhonkco phakathi kwemozulu kunye namaxesha onyaka anempembelelo yeempawu ze-rheumatic. Kodwa asiqinisekanga ncam ukuba kutheni. Nangona kunjalo, kukho iingcamango ezininzi-kuquka ezi zilandelayo:
Utshintsho kwixinzelelo lomoya we-barometric, umzekelo kuxinzelelo oluphantsi, kunokubangela i-tendon, imisipha, amajoyina kunye nezicubu ezixhamlayo. Oku kubangela iintlungu kwizihlunu ezichatshazelwa sisifo samathambo.
Ukushisa okuphantsi kunokunyusa ubukhulu be-synovial synovial fluid ebangela ukuba amajoyina aqine.
Ngokuqhelekileyo awusebenzi kakhulu xa imozulu imbi kwaye kubanda. Ukunyakaza okuncinci kubomi bemihla ngemihla kunokunyusa iimpawu kunye nentlungu.
Iinguqu ezinkulu zemozulu kunye nezaqhwithi ezilungileyo zihlala zibeka ubushushu kwimo yethu. Siyazi kwakhona ukuba uziva uphantsi, oku kunokwandisa intlungu kunye neempawu.
Uphononongo olukhulu olunabathathi-nxaxheba be-2658 olupapashwe kwijenali yophando yeNdalo ixhase ezi ziphumo (4). Apha, abathathi-nxaxheba bacelwa ukuba benze imephu yeentlungu, iimpawu, ukuqina kwasekuseni, umgangatho wokulala, ukukhathala, isimo sengqondo kunye nenqanaba lomsebenzi.
Iziphumo zibonise ukubaluleka, nangona ukulinganisela, ukulungelelaniswa phakathi kweentlungu ezixeliweyo kunye nezinto ezifana nomswakama, uxinzelelo lwe-barometric kunye nomoya. Uphinde wabona ukuba oku kuphinde kwagqitha njani ngaphaya kweemvakalelo kunye nomsebenzi womzimba phakathi kwabathathi-nxaxheba.
Apha siza neengcebiso zamanyathelo ethu ngokuchasene nokutshintsha kwemozulu. Uninzi lwenu luqhelene nokuninzi koku, kodwa sisenethemba lokuba uninzi lwenu lungaxhamla kwamanye amacebiso.
Ingcebiso ngokuchasene nokutshintsha kwemozulu
Nxiba imozulu- kwaye uhlale uzisa iileya ezongezelelweyo. Abantu abaninzi abane-rheumatism bafumana izilonda ezibandayo kunye nokutshintsha kweqondo lokushisa emini. Ngoko ke kubaluleke kakhulu ukuzisa iimpahla ezongezelelweyo ukuthathela ingqalelo oku. Yiza nesikhafu, umnqwazi, iiglavu kunye nezihlangu ezilungileyo xa uhamba uhambo - nokuba imozulu ibonakala izinzile.
Nxiba iikawusi zoxinzelelo kunye neeglavu zoxinzelelo. Ezi ziingubo zokuxininisa ezenziwe ngokukodwa ukuze kugcinwe ukujikeleza kwezandla kunye neenyawo, ezinokuthi zinokukunceda ugcine ubushushu. Zingasetyenziswa kakuhle phantsi kweentlobo ezininzi zeeglavu kunye ne-mittens.
Gcina inqanaba lomsebenzi. Kumaxesha onyaka abandayo afana nokwindla nobusika, sinomkhwa wokudinwa wokungakhuthali. Kodwa siyazi ukuba ukwenza umsebenzi womzimba kubaluleke kakhulu ukugcina iimpawu zijonge. Ukuhamba, ukuqeqeshwa kwamandla kunye nemithambo yokuzolula kunokukunceda ngeentlungu kunye nokuqina.
Inqanaba eliphantsi levithamini D? Uninzi lwethu lunamanqanaba aphantsi evithamini D ngexesha nasemva kobumnyama. Thetha nogqirha wakho ukuba uyakrokrela ukuba oku kungasebenza nakuwe.
Sebenzisa unyango lobushushu: Ipakethi yokushisa enokusetyenziswa kwakhona kunye / okanye iibhafu ezishushu zinokukunceda ukuba unciphise ukuqina kwemisipha kunye nokuqina kwamalungu.
Icebiso loku-1: Iimpahla ezicinezelayo zemilenze, iinyawo kunye nezandla
Ukusetyenziswa kweempahla zokuxinzelela kukuzilinganisa okulula okulula ukufumana iindlela ezilungileyo ngokumalunga nokusetyenziswa. Onke amakhonkco kuncedo olungezantsi avula kwifestile entsha yokufunda.
Iikawusi zokunyanzeliswa komlenze (Ukusebenza ngokuchasene necramp zomlenze)
UPlantar Fascite ucinezelo Iikawusi (ilungile kwiintlungu zonyawo kunye ne-plantar fasciitis)
Ngokusebenzisa amakhonkco angasentla unokufunda ngakumbi malunga nemilinganiselo yokuzenzela - kwaye ubone amathuba okuthenga.
Iingcebiso 2: Iphakheji yokufudumeza enokuphinda isebenze
Ngelishwa, ukunyanzeliswa kwemisipha kunye nokuqina kwamalungu zizinto ezimbini ezidityaniswe ne-rheumatism. Ke ngoko sicebisa ukuba zonke ii-rheumatologists zibe ne-multipack ekhoyo. Uyitshisa nje- kwaye emva koko uyibeke kwindawo enzima kwaye eqinile. Kulula ukuyisebenzisa.
Unyango lwe-Muscle engapheliyo kunye neentlungu ezidibeneyo
Akumangalisi ngokukodwa ukuba abantu abaninzi abaneentlungu ezingapheliyo bafuna unyango lomzimba. Iingxelo ezininzi ezilungileyo kunye neziphumo ezithomalalisayo zeendlela zonyango ezifana nonyango lwe-muscle knot, i-intramuscular acupuncture kunye nokuhlanganiswa ngokubambisana.
Ngaba uyafuna uBonwano kwiiklinikhi zeentlungu?
Siyavuya ukukunceda kuvavanyo nakunyango kwenye yeeklinikhi zethu ezimanyeneyo. Apha ungabona isishwankathelo sendawo esikuyo.
Iiklinikhi zethu eziManyeneyo
Ukuzivocavoca kunye noQeqesho kuwe ofuna ukuya ngaphezulu
Mhlawumbi unomnqweno wokuhamba ngaphezulu okanye uhambo olude kule ntwasahlobo? Apha sibonisa inkqubo yemizuzu eli-13 yokuzilolonga eyenzelwa abo bane-hip osteoarthritis. Khumbula ukuba ukuba akukwazi ukuphakama usehla emgangathweni, loo nxalenye yocwangciso inokushiywa imile. Sicebisa ukuba uzame ukulandela kwaye uqeqeshe nathi kwividiyo - kodwa isebenza kakuhle ukuba awukwazi ukuyenza ngesantya esifanayo okanye ngesantya. Zama ukwenza umkhwa wokubeka le nkqubo yomthambo kumabonwakude okanye kwiPC yakho - ngokukhethekayo kathathu ngeveki. Zive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi kwicandelo lezimvo elingezantsi kweli nqaku okanye kwitshaneli yethu yeYouTube ukuba unemibuzo ovakalelwa kukuba sinokukunceda ngayo.
I-VIDEO: Inkqubo ye-13 yoMzilo weMizuzu yeeHips kunye noBumva
Yiba yinxalenye yosapho! Zive ukhululekile ukuba ubhalise simahla kwisiteshi sethu seYouTube (cofa apha).
Imithombo kunye nezalathiso:
1. Guedj et al, 1990. Impembelelo yeemeko zemozulu kwizigulane ze-rheumatic. UAnn Rheum Dis. 1990 Mar; 49 (3): 158-9.
2. Hayashi et al, 2021. Uvakalelo lwemozulu oluhambelana nomgangatho wobomi kwizigulane ezine-fibromyalgia. BMC Rheumatol. 2021 Meyi 10; 5 (1): 14.
Imozulu kunye nemozulu ephakathi e-Oslo. Ngokusekwe kuqikelelo lwemozulu oluqokelelwe kwixesha lika-3–2005.
4. Dixon et al, 2019. Indlela imozulu eyichaphazela ngayo intlungu yezazinzulu zabemi zisebenzisa i-app ye-smartphone Npj Digit. Nge. 2, 105 (2019).
11 / 01 / 2021 /i udinwe, rheumatism/av ubuhlungu
Ngaba uphethwe yimilenze? Uphando lubonakalisile ukuba abo bane-fibromyalgia baneziganeko eziphezulu zeekram zomlenze. Kule nqaku, sijonga ngakumbi unxibelelwano phakathi kwe-fibromyalgia kunye necramp yomlenze.
Uphando ludibanisa oku kuhlobo lwentlungu ye-fibromyalgia ebizwa ngokuba hyperalgesia (1). Siyazi kwakhona kwasekuqaleni ukuba ukutolikwa kwentlungu kunamandla ngakumbi kwabo bachaphazeleka yile meko ingapheliyo. Uphononongo olucwangcisiweyo lokuphononongwa lubonakalisile ukuba kunokuba ngenxa yokusebenza kakhulu kwenkqubo yeemvakalelo kweli qela lesigulana (2).
Iingcebiso ezilungileyo nezikhawulezayo: Emazantsi eli nqaku, ungabukela ividiyo ngokuzivocavoca umthambo wentlungu yomlenze. Sikwabonelela ngeengcebiso malunga namanyathelo akho (njenge iikawusi ucinezelo ithole og Iisokisi zokunyanzelwa kwe-fasciitis) kunye super-wemagniziyam. Amakhonkco avulekileyo kwiwindow entsha.
Kumasebe ethu ahlukeneyo eVondtklinikkene e-Oslo (Lambertseter) kunye noViken (Eidsvoll Isandi og Råholt), oogqirha bethu banobuchule obukhethekileyo obuphezulu kuvavanyo, unyango kunye noqeqesho lokubuyisela unyawo, umlenze kunye ne-ankle. Cofa kwiikhonkco okanye apha ukufunda ngakumbi malunga namasebe ethu.
Zintoni iiKram zeMilenze?
Hyperalgesia kunye neFibromyalgia
Ikhonkco phakathi kweFibromyalgia kunye neenyawo zomlenze
Ukuzenzela amanyathelo ngokuchasene necramp yomlenze
Iikram zomlenze zinokwenzeka emini nasebusuku. Eyona nto ixhaphakileyo kukuba kwenzeka ebusuku emva kokulala. Imisipha yenkampu etholeni ikhokelela ekuqhubekekeni okuqhubekayo, okungazibandakanyiyo kunye nokuqaqanjelwa yimisipha yethole. Ikhampasi inokuchaphazela lonke iqela lemisipha okanye iindawo kuphela zemisipha yethole. Iziqendu zihlala kwimizuzwana ukuya kwimizuzu eliqela. Xa uchukumisa umsipha obandakanyekayo, uya kuba nakho ukuziva ukuba zombini uxinzelelo lubuhlungu kwaye luxinene kakhulu.
Ukuhluthwa okunjalo kunokuba nezizathu ezahlukeneyo. Ukuphelelwa ngamanzi emzimbeni, ukungabikho kwe-electrolyte (kubandakanya i-magnesium), izihlunu zomlenze ezigqithisileyo kunye ne-hyperactive nerves (njenge-fibromyalgia) kunye ne-nerve pinching ngasemva zizonke ezinokubangela. Ukuba nesiqhelo sokolula izihlunu zethole ngaphambi kokuba ulale kunokunceda ukunciphisa izehlo. Amanye amanyathelo anje iikawusi ucinezelo inokuba yinto efanelekileyo yokunyusa ukujikeleza kwegazi kuloo ndawo- kwaye ke oko kunceda ukuthintela ukuxhuzula (ikhonkco livula kwiwindow entsha).
Kwintshayelelo yenqaku, sivumelene ukuba uphononongo lubonakalise ukungasebenzi kwinkqubo yovalo kwabo bachaphazeleka yi-fibromyalgia (1, 2). Ngokukodwa, oku kuthetha ukuba inkqubo yemithambo-luvo ithumela imiqondiso emininzi kakhulu kwaye eyomeleleyo- ethi ikhokelele ekuphumleni okuphezulu (ubukhulu bomsebenzi kwimithambo-luvo) kwaye ngenxa yoko ukuphambana okuphela kukuxhuzula. Ngenxa yenyani yokuba kuye kwabonwa ukuba liziko lokutolika iintlungu kwi ingqondo ayinayo «izihluzo zentlungu», Kulawo ane-fibromyalgia, ubunzima beentlungu buyaqina.
-Iinkampu zomlenze Ngenxa yeempawu zempazamo?
Kukwakholelwa ukuba inkqubo eyoyikeka kakhulu ye-fibromyalgia inokukhokelela kwiimpawu zempazamo kwiimisipha, ezinokuthi zikhokelele kuthintelo olungazibandakanyiyo kunye ne-cramping.
Unxibelelwano phakathi kweekram ezinemilenze kunye neFibromyalgia
Inkqubo eyoyikeka kakhulu
Ukwanda kokuSabela okuVuthayo kwiTissue ethambileyo
Abo bane-fibromyalgia ke banokonyuka kwemisipha, kunye nenkqubo ye-neripheral 'hyperactive'. Oku kukhokelela ekuqaqambeni kwezihlunu kunye necramps zemisipha. Ukuba sijonga ezinye iimeko ezinxulunyaniswa ne-fibromyalgia- enje Isifo samathumbu esingaqondakaliyo -Ke siyabona ukuba le ikwayindlela yokuqaqamba kwezihlunu, kodwa kule meko imalunga izihlunu ezigudileyo. Olu luhlobo lwemisipha eyahlukileyo kwimisipha yamathambo, njengoko ikakhulu sikufumana oku kumalungu asemathunjini omzimba (njengamathumbu). Ukusebenza kakhulu kolu hlobo lwefayibha yemisipha kuya kuthi, njengesihlunu emilenzeni, kukhokelele ekuchaseni ngokungazibandakanyi kunye nokucaphuka.
Inye ene-fibromyalgia ifuna ukwanda kokujikeleza kwegazi ukugcina ukusebenza kwesihlunu okuqhelekileyo emilenzeni. Oku kungenxa yokuba imisebenzi yemisipha ephezulu ibeka amabango aphezulu kunikezelo lwee-electrolyte kwigazi- njengemagniziyam (funda ngakumbi nge-super-magnesium apha) kunye necalcium. Iqela ke ngoko linika ingxelo yokwehla kweekram ezinomdibaniso iikawusi ucinezelo ithole kunye nemagnesium. I-Magnesium ifumaneka kwi uhlobo lokutshiza (esetyenziswa ngokuthe ngqo kwimisipha yethole) okanye kwifom yethebhulethi (nayo kwi ngokudibanisa necalcium).
I-Magnesium inokunceda izihlunu zakho zexesha elizolileyo. Ukusetyenziswa kweekawusi zoxinzelelo kunceda ukugcina ukujikeleza kunyukile- kwaye oko kunyusa isantya sokulungisa kwimisipha ebuhlungu kunye nokomelela.
Amanyathelo olula onokuwathatha ukonyusa ukujikeleza kwegazi ngala:
Ukusetyenziswa kwemihla ngemihla iikawusi ucinezelo ithole (Ukusebenza ngokuchasene necramp zomlenze)
Ukusetyenziswa kwemihla ngemihla UPlantar Fascite ucinezelo Iikawusi (ukuba ukhathazwa ziinyawo)
Imithambo yemihla ngemihla (jonga ividiyo engezantsi)
Unyango lweeNkampu zomlenze
Maninzi amanyathelo onyango olusebenzayo kunyikima womlenze. Phakathi kwezinye izinto, ukusebenza kwezihlunu kunye nokuthanjiswa kunokuba nefuthe lokuphumla- kwaye kunokunceda ukukhulula izihlunu ezixineneyo. Kwixesha elide kunye neengxaki ezinzima, kunjalo Shockwave Therapy ube sisisombululo esifanelekileyo. Olu luhlobo lonyango lonyango oluneziphumo ezibhalwe kakuhle ngokuchasene necramp yomlenze. Unyango luhlala ludityaniswa nokudityaniswa ngokudibeneyo kwesinqe kunye nomqolo ukuba kungafunyanwa ukungasebenzi kakuhle kwezi zinto- kwaye kusenokukrokrelwa ukuba kunokubakho ukuphazamiseka kwemithambo-luvo ngasemva egalelo kwingxaki emilenzeni nasezinyaweni.
Ngaba ukhathazwa zii cramp zomlenze?
Siyavuya ukukunceda kuvavanyo nakunyango kwenye yeeklinikhi zethu ezimanyeneyo.
Ukuzivocavoca kunye noQeqesho ngokuchasene neLeft Cramps
Ukuzivocavoca umzimba okunceda ukomeleza imilenze, amaqatha kunye neenyawo kunokuba negalelo ekuphuculeni ukujikeleza kwegazi kwimilenze esezantsi. Inokukunceda ukuba ufumane izihlunu ezinokuqina kunye nezihlengahlengisayo. Ukuzivocavoca ekhaya ngokwesiko kunokumiselwa ngugqirha wakho womzimba, ugqirha wezonyango okanye ezinye iingcali zezempilo ezifanelekileyo.
Kwividiyo engezantsi ungabona inkqubo yokuzivocavoca esiyicebisayo kwiimpawu zomlenze. Siyazi ukuba le nkqubo ingabizwa enye into, kodwa inyani yokuba iyanceda ukuthintela iintlungu eqatheni ikwabonwa njengebhonasi. Zive ukhululekile ukunxibelelana nathi kwicandelo lamagqabaza apha ngezantsi kweli nqaku okanye kwisiteshi sethu se-Youtube ukuba unemibuzo oziva ngathi sinokukunceda ngayo.
I-VIDEO: Imithambo emi-5 yokuziqhelanisa neNzungu elunyaweni
1. USluka okqhubekayo, 2016. I-Neurobiology ye-fibromyalgia kunye neentlungu ezingapheliyo ezixhaphakileyo. I-Neuroscience Umqulu 338, 3 Disemba 2016, iphepha 114-129.
2. IBordoni okqhubekayo, 2020. Izihlunu zeMisipha. Ipapashiwe. Isiqithi saseTreasure (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan-.